Ukugqithiswa ngumphumo wento yokuthenga okanye isigqibo kwiqela lomntu ongenalo ukhetho kwisiganeko kwaye iimfuno zabo azizange zithathwe ngqalelo. Iingaphandle, ke, ziyimpembelelo echaphazelekayo ewela kumaqela angabandakanyekanga nakwezinye iimarike njengomvelisi okanye umthengi wezinto ezilungileyo okanye iinkonzo. Amaphandle angabonakali okanye angabonakali, kwaye zangaphandle zingabangela ukuba kukho imveliso okanye ukusetyenziswa kwezinto ezilungileyo, okanye zombini.
Zangaphandle ezimbi zibeka iindleko kumaqela angabandakanyekanga kwiimarike, kwaye ngaphandle kwangaphandle kunika inzuzo kumaqela angabandakanyekanga kwimarike.
Iindleko zoKhuphela ngaphandle
Umzekelo wamandulo wokungaphaya kokungcolileyo kungcoliseko. Ibhizinisi elithumela ukungcoliseka ngexesha lokuvelisa imveliso ngokuqinisekileyo linceda umnikazi womsebenzi, owenza imali kwimveliso. Nangona kunjalo, ukungcola kunomphumo ongenakulindeleka kwimeko kunye noluntu olukufutshane. Ichaphazela abanye abangenakho ukukhetha kulo mbandela kwaye mhlawumbi babengaqwalaselwanga kwizigqibo zokuvelisa, kwaye ngoko ke kungabikho ngaphandle.
Ngaphandle kwezinto ezilungileyo zivela kwiindlela ezininzi. Ukuya emsebenzini ukuqhuba ibhasikidi kubandakanya ukuphelelwa ngaphandle kokungcoliswa kokungcola. Umqhubi, ngokuqinisekileyo, ufumana inzuzo enxulumene nempilo yokuhamba ngebhayisikili, kodwa umphumo lo unokuxinwa kwezithuthi kunye nokuncitshiswa kokungcola kwindalo ngenxa yokuthatha enye imoto kwindlela yindlela engaphandle yokukhwela ibhayisikili ukuya emsebenzini .
Ingqongileyo kunye noluntu alubandakanyekanga kwisigqibo sokuhamba ngesithuthuthu, kodwa zombini zibona izibonelelo ezivela kuloo sigqibo.
Amaphandle angaphandle kweMveliso yokuSebenza
Iingaphandle ziquka zombini imveliso kunye nokusetyenziswa kwimarike. Naliphina imiphumo yokuhluthayo eyenziwa kumaqela angabandakanyekanga ekuveliseni okanye ekudleni angaphandle, kwaye zombini unokuba nethuba okanye ungekho.
Ukungaphandle kwemveliso eyenzekayo xa kuveliswa umkhiqizo kunika indleko okanye inzuzo kumntu okanye iqela elingenanto yokwenza nenkqubo yokuvelisa. Ngoko, njengoko kuboniswe kumzekelo wokungcola, ukungcola okuveliswa yinkampani yinto engekho ngaphandle kwemveliso. Kodwa imveliso inokuvelisa ngaphandle kwangaphandle, njengokuba ukutya okuthandwayo, njengama-cinnamon buns okanye i-candy, kuvelisa iphunga elimnandi ngexesha lokukhiqiza, ukukhulula oku ngaphandle kweendawo ezikufutshane.
Ukusetyenziswa kwangaphandle kubandakanya umsi wesandla wesibini kwi-cigarettes, esinika iindleko kubantu abasondeleyo abangabonakaliyo kwaye ngenxa yoko banemibi, kwaye imfundo, ngenxa yokuba iinzuzo zokuya esikolweni ezibandakanya ukuqeshwa, ukuzinza nokuzimela kwemali zinemiphumo emihle kuluntu , kwaye ke ngoko kungaphandle.
I-Resources.com ze-Macroeconomics Resources Bookbook
I-Primer kwixabiso I-Elasticity of Demand
Imithandazo yeTestamente eNtsha
Izixhobo eziphezulu zeDephi ukufikelela kwi-MySQL
UkuFunda - Ukuchonga iNkcazo yeMakhono
Ngaphambi Kokukhetha Umsebenzi Wezobugcisa
5 AmaPirati aphumelelayo "kwiGolide yamaPirates"